China Chikafu cheGiredhi Gelatin fekitori uye vagadziri | Yasin
Yekutengesa gelatin inosiyana kubva pa80 kusvika 260 Bloom gramu uye, kunze kwezvinhu zvakasarudzika, hazvina mavara akawedzerwa, zvinwiwa, zvinodzivirira, uye makemikari ekuwedzera. Gelatin inozivikanwa seyakachengeteka chikafu chinodakadza gelatin chinonyanya kuyeuka-mukati-mukanwa-maitiro uye kugona kwayo kugadzira thermo inodzoserwa gels. Gelatin ipuroteni inogadzirwa kubva pasarudzo hydrolysis yemhuka collagen. Chikafu-giredhi gelatin inoshandiswa sejelling mumiriri mukugadzira jelly, marshmallows uye gummy macandi. Zvakare, inoshandiswa zvakare seyakagadzika uye inomesa mumiriri mukugadzira jamu, yoghurt uye ayizi-kirimu.
Zvepanyama uye Zvemakemikari Zvinhu
Jelly Simba Bloom 140-300Bloom
Viscosity (6.67% 60 ° C）) mpa.s 2.5-4.0
Kuputsika kweViscosity % -10.0
Mhute % -14.0
Kujeka mm ≥450
Kufambisa 450nm % ≥30
Sarufa Dioxide mg / kg ≤30
Mvura Isina Kubhururuka % .20.2
Kurema Pfungwa mg / kg .51.5
Yese Hutachiona Hwekuverenga CFU / g ≤10000
Kuyerera Chati ZveGelatin Production
Gelatin inowanzoshandiswa mumakonzo nekuti inopupa furo, majiroji, kana kusimbisa kuita chidimbu chinonyungudika zvishoma nezvishoma kana kusungunuka mumuromo.
Kutapurika senge gummy bere ine yakakwira yakakwira muzana gelatin. Aya macandi anopera zvishoma nezvishoma nekudaro achiwedzera kunakirwa kweswiti uku uchinatsiridza kunaka.
Gelatin inoshandiswa muzviputi zvakapetwa senge marwashmallows painoshandira kudzikisira kumeso kwesirusi, kudzikamisa furo kuburikidza nekuwedzera viscosity, isa furo kuburikidza negelatin, uye kudzivirira shuga crystallization.
Dairy uye Desserts
Gelatin dhizeti inogona kugadzirirwa uchishandisa Rudzi A kana Type B gelatin ine Blooms pakati pe 175 ne 275. Iyo yakakwira Bloom iyo shoma gelatin inodiwa kuti ive seti chaiyo (kureva 275 Bloom gelatin inoda ingangoita 1.3% gelatin nepo 175 Bloom gelatin inoda 2.0% kuwana yakaenzana seti). Zvinotapira kunze kwesucrose zvinogona kushandiswa.
Vatengi vanhasi vane hanya nekoriori yekudya. Nguva dzose gelatin madhiri ari nyore kugadzirira, kuravira kunofadza, kunovaka muviri, kunowanikwa mune akasiyana siyana evaraidzo, uye ine chete makumi masere macalorie pahafu-kapu yekushandira. Shuga-dzisina shanduro dzinongova sere macalorie pakushumira.
Gelatin inoshandiswa kujekesa aspics, musoro chizi, souse, roll rolls, glazed uye makedheni hams, uye jellied nyama zvigadzirwa zvemarudzi ese. Iyo gelatin inoshanda kutora majusi enyama uye kupa chimiro uye dhizaini kune zvigadzirwa zvingadai zvichidonha. Yakajairwa mashandisirwo ezinga kubva pa1 kusvika pa5% zvichienderana nerudzi rwe nyama, huwandu hwemuto, gelatin Bloom, uye magadzirirwo anodikanwa mune yekupedzisira chigadzirwa.
Waini neJuice Kupedza
Nekuita se coagulant, gelatin inogona kushandiswa kukonzeresa kusachena panguva yekugadzirwa kwewaini, doro, cider nemuto. Iine zvakanakira risingagumi pasherufu hupenyu mune yakaoma fomu, nyore kubata, kukurumidza kugadzirira uye kupenya kujekesa.
Kunyanya mu25kgs / bhegi.
1. Rimwe bhegi repakati mukati, maviri akasungwa masaga ekunze.
2. Rimwe Poly bhegi mukati, Kraft bhegi rekunze.
3. Maererano nezvinodiwa nevatengi.
1. ine nhovo: 12Mts ye20ft Container, 24Mts ye40Ft Container
2. isina nhovo: 8-15Mesh Gelatin: 17Mts
Kupfuura 20Mesh Gelatin: 20 Mts
Gara mumudziyo wakasungwa wakavharwa, wakachengetwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma, ine mweya.
Ramba uri muGMP yakachena nzvimbo, zvakanaka-akadzora nekaupenyu mwando mukati 45-65%, tembiricha mukati 10-20 ° C. Zvinonzwisisika gadziridza tembiricha uye hunyoro mukati meimba yekuchengetera nekugadzirisa Mhepo, kutonhodza uye dehumidification zvivakwa.
Gelatin Chikafu cheGiredhi